‘सडक नाटक’ मार्फत करदाता शिक्षा बढाउँदै काठमाडौँ महानगर – Sajha Pati
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले करदाता शिक्षा बढाउन ‘सडक नाटक’ थालेको छ । सुर्पेटो मिडियासँगको सहकार्यमा ‘’आनासुकी घरवेटी बा’ शीर्षकमा सडक नाटक प्रदर्शन थालिएको हो । राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीकाअनुसार करदातालाई कर तिर्न बाध्य भएको महसुस नहोस् । यो नागरिक दायित्व हो भनेर करदातालाई सचेत गराउन पहिलो चरणामा महानगरका १० स्थान सडक प्रदर्शन हुँदैछ । यसको शुरुवात्मा आज हनुमानढोका कालभैरव पछाडिको डवलीमा नाटक मञ्चन गरियो ।
आज नै कालिमाटी, कलंकी, चावहिल, गौशाला, नयाँबानेश्वरलगायतका विभिन्न १० स्थानमा नाटक प्रदर्शन हुनेछ । कृष्णजीत राईले लेख्नुभएको नाटक रीता थापाले निर्देशन गर्नुभएको हो । नाटकमा सुरज विष्ट (लोभी घरवटेी बा), जीवन थापा (असल छिमेकी), मञ्जु गिरी (वडा कार्यालयको कर्मचारी), कञ्चन सापकोटा (भाडावाल) ले अभिनय गर्नुभएको छ ।
कोविडका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको प्रक्षेपण नै कम गरिएको छ । विभागका प्रमुख डा. अधिकारीकाअनुसार महामारीका समयमा दबाब दिएरभन्दा दायित्व बोध गराएर राजस्व असुली गर्ने योजनाअनुरुप सडक नाटक प्रदर्शन थालिएको हो । विभागले व्यवसाय कर अनुगमन कार्यलाई नियमित गरिरहेको छ । यस क्रममा कर तिर्नेलाई धन्यवाद पत्र र नतिर्नेलाई विभागमा हाजिर हुने पत्र दिने गरिएको छ ।
नाटक करीब २० मिनेटको छ । घरधनीलाई बहाल नतिरी भाग्ने भाडावाललाई खोजेर भाडा असुल्न हिँडेको घरधनी आफूले महानगरलाई कर नतिरेकाकारण आफैँ कानुनको परिबन्दमा परेको कथा नाटकमा देखाइएको छ । कर केही समय छल्न सकिन्छ । तर, कुनै न कुनै दिन कानुनको फन्दामा परिन्छ । कानुनी कारवाहीमा पर्ने त्यो समय आउनु अघि थोरै थोरै कर तिर्दै गए सम्मानजनक जीवन बाँच्न सकिने नाटकले देखाउन खोजेको सन्देश हो ।
महानगरले यो वर्ष व्यवसाय करमा २० प्रतिशत र होटल, मनोरञ्जनसँगै पर्यटनसँग सम्वन्धित क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत छुट दिएको जानकारी छ । होटल, मनोरञ्जनसँगै पर्यटनसँग सम्वन्धित क्षेत्रलाई हामीले असारसम्म नै छुट दिएका छौँ । अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले चैत मसान्तसम्मका लागि सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिएका थियौँ । होटलहरुलाई असारसम्म नै सम्पत्ति करमा ७५ प्रतिशत छुट दिएका छौँ ।’
भाडावाललाई कोविडका समयमा १ महिनाको वहाल छुट दिने घरधनीलाई महानगरले बहाल करमा छुट दिएको छ ।